Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 12)
Android Nougat 7.1.2 waxaa ku jiri doona digniino isticmaalka batteriga, hagaajinta isku xirnaanta iyo waxyaabo kale oo badan
Android Nougat 7.1.2 hadda ayaa la sii daayay waxaana durba loo sii daayay qalabka Google Pixel iyo Nexus. Iyadoo ...
Waqtiga hurdada ee Spotify iyo wax kale. YAAB !!
Qoraalkan, marka laga reebo inaan kuu keeno saacad xiritaanka loogu talagalay Spotify, fiidiyowga ku lifaaqan waxaan kaaga tagayaa fajaciso aad u xiiso badan.
Sida loo jadwaleeyo dirista fariimaha shabakadahaaga bulshada
Halkaan waxaad ka heysataa codsi ama qalab, jadwalka jadwalka dirista fariimaha shabakadahaaga bulshada ugu weyn.
Ciyaaryahan muusig ah oo cajiib ah oo loogu talagalay Android !!
Halkan waxaad ku leedahay muusiggan muusigga ah ee cajiibka ah ee loogu talagalay Android oo aan kuu xaqiijin karo inuu ka mid yahay kuwa ugu fiican ee aan ku arkay bilaash.
App aqoonsan miyuusigga aad dhageysaneyso si uu kuugu muujiyo adiga oo ku jira qaab video clip ah si toos ah You Tube, marka lagu daro inuu ku siinayo talooyin wax ku ool ah.
[APK] Beddelka ugu wanaagsan ee Google Play Store
Halkan waxaan kuugu dhaafayaa waxa aan maanta u maleynayo inay yihiin bedelka ugu fiican ee Google Play Store iyo halka aan ka heli doonno barnaamijyo aan ku jirin dukaanka Google.
Lacagaha Aayadda, barnaamijka lacag-bixinta cusub ee u dhexeeya isticmaaleyaasha ay tahay inaad ogaato
Lacag bixinta Aayaduhu waa barnaamijyada lacag-bixinta ee cusub ee u dhexeeya asxaabta oo aad u fudud in la isticmaalo oo aan lahayn nooc kasta oo kharash ama guddi u ah isticmaalaha.
Boqortooyada Ingiriiska waxay weydiisataa WhatsApp wada shaqeyn
Boqortooyada Ingiriiska ayaa weydiisatay WhatsApp caawinaad si ay u ururiso macluumaadka si loo hormariyo baaritaanka weerarkii todobaadkii hore ka dhacay London
Kiiboodhka ugu-beddelka badan ee loogu talagalay Android
Halkan waxaad ku haysataa waxa maanta ah kiiboodhka ugu-beddelka loogu talagalay Android. Kiiboodh kaas oo aan ku beddeli karno muuqaalkiisa oo dhan.
[APK] [Lama faafin] Codsi ah «El Tiempo» oo loogu talagalay tijaabiyaasha beta oo aad iyo aad ufiican
Halkan waxaad ka heleysaa codsi El Tiempo oo aan lagu daabicin Play Store iyo inaad kaliya ka heli karto barnaamijka tijaabinta beta.
[APK] Soo dejiso oo rakib kamaraddii asalka ahayd ee HTC iyo sawir-gacmeedka
Halkan waxaad ku haysaa apk-ka kamaradda HTC iyo barnaamijyada gallery si loogu rakibo wax kasta oo Android 5.0 ama terminaal sare ah.
Sida loo helo Android "O" ogeysiisyo firfircoon oo Android kasta ah
Casharbaris si ay awood ugu siiso "O" ogeysiisyada firfircoon wixii Android ah. Kaararka ogeysiiska firfircoon
Abka ugufiican ee lagu duubo shaashaddaada Android bilaash
Halkan waxaad ku leedahay codsi cusub, aniga ahaan dalabka ugu fiican ee xilligan si aan ugu duubo shaashadda Android si bilaash ah oo aan lahayn xaddidaad ama calaamado.
Soodejiso Sawirada 'Androidsis', waa BILAASH !!
Waraaqaha Androidsis ee aan si joogto ah ugu isticmaalo Android-kayga. Qaar ka mid ah asalka FullHD si aad ugu raaxaysato Android-kaaga bilaash.
[APK] Soo degso oo ku rakib kamaradda Asus PixelMaster wax kastoo Android ah
Sidee rabitaankaagu u yahay amarro anaga, halkan waxaan kuugu soo qaadaneynaa apk-ga gacanta ee Asus Pixel Master Camera si aad ugu rakibto wixii Android ah.
Sida loo badbaadiyo batari fara badan Android adoo ka shaqeynaya habka Doze ee ka socda Android 4.1 ama ka sareeya
Halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa dalabkii ugu fiicnaa ee aad batari badan ku keydiso Android adoo ku qasbaya habka Doze isla markaaba iyo Android 4.1
Jadwalka sii deynta ee Android O
Nooca ugu dambeeya ee Android O wuxuu imaan doonaa rubuca seddexaad ee 2017 sida ku xusan Google, laakiin illaa iyo markaas waxaa jiri doona noocyo badan oo horudhac ah oo ku saabsan qaabka Alpha iyo Beta.
Falanqeynta Horudhaca Android O: Dhammaan wararka ilaa hadda
Waxaan ku tuseynaa dhammaan wararka iyo shaqooyinka nooca beta ugu horreeya ee soo-saareyaasha (Horudhaca Developer) ee nidaamka soo socda ee Android O.
Sida loo qaado shaashado dhaadheer
Casharka fiidiyowga ee soo socda waxaan ku sharxayaa sida loo qaado shaashadda dheer qaab aad iyo aad u fudud oo leh barnaamij gebi ahaanba bilaash ah.
Abka ugufiican ee dib loogu hagaajiyo sawirada adoo ka saaraya asalka ama shay kasta oo aan loo baahnayn
Halkan waxaad ku leedahay barnaamijka ugufiican ee dib loogu hagaajiyo sawirada adoo ka saaraya asalka ama shey kasta ama aad rabto si otomaatig ah.
Tani waa sida nooca desktop-ka ee 'Setbeat' u shaqeynayo, 'Spotify clone' oo bilaash ah
Ma rabtaa inaad ku raaxeysato Setbeat laakiin ma lihid terminaal ku habboon oo Android ah mise waxaad dooneysaa inaad ka hesho kombuyuutarkaaga shaqsiga ah? Setbeat Web.
Ma ogtahay inaad soo celin karto App lacag la siiyay?
Haddii ay dhacdo inaadan ogeyn, dukaanka barnaamijka Google wuxuu ku siinayaa fursad aad ku soo celiso barnaamij lacag bixin ah oo laguu soo celiyo.
[APK] Iskuxidhka Spotify bilaashka ah oo leh astaamaha 'Spotify Premium' sida soo degsashada muusikada si loo dhagaysto khadka-tooska ah
Halkan waxaad ku haysaa barnaamijkan 'Spotify clok apk', oo bilaash ah oo leh astaamaha 'Spotify Premium' sida soo degsashada muusikada si aad uga dhagaysato qadka.
Android 8 'O': Faahfaahin ayaa ka soo baxday afar muuqaal oo cusub
Android 8.0 'O' cusub ayaa soo bandhigi doona ogeysiisyo la hagaajiyay, astaamo firfircoon iyo shaqo loogu talagalay xulashada qoraalka caqliga badan.
Abka ugufiican ee lagu abuuro avatar-kaaga shaqsiga ah
Halkan waxaan ku soo bandhigayaa waxa aniga ii ah barnaamijka ugu fiican ee lagu abuuro avatar shaqsiyan u gaar ah oo aan ugu adeegsanno astaan ​​ahaan shabakadaha bulshada ama wadaagno.
Codsiyada ugu fiican ee beddelka ah ee WhatsApp
In kasta oo aan ognahay in WhatsApp ay tahay boqoradda codsiyada farriimaha degdegga ah, haddana waxaa jira laba ikhtiyaar oo lagu xisaabtami karo, Telegram iyo Messenger.
Sida loogu daro saxeexa dhijitaalka ah dukumiintiyada ka socda Android-kaaga. (Oo buuxi)
Tababbarka fiidiyowga ee la taaban karo oo aan ku tusinayo sida loogu daro saxeexa dhijitaalka ah dukumiintiyada aaladdayada Android iyo iyada oo aan loo baahnayn in la daabaco dukumenti kasta.
[APK] Soo dejiso oo ku rakib kamaradda Meizu MX6 mid kastoo Android ah
Ma rabtaa inaad ku rakibto kaamerada Meizu MX6 Android kasta oo aan loo baahnayn Root? Waa tan apk iyo casharka fudud ee ku saabsan sida loo rakibo.
[APK] [ROOT] Sida loo rakibo arjiga muusikada ee Sony Xperia XZ Premium wixii Android ah (nooca ugu dambeeyay)
Halkan waxaad ku haysaa casharradan ku saabsan sida loo rakibo nooca cusub ee barnaamijka muusikada ee Sony Xperia XZ Premium ee ku saabsan Android kasta.
Ku rakib qalabka casriga ah ee loo yaqaan 'Google Pixel Widget' Android kasta
Halkan waxaan kaaga tagaynaa Google Pixel Widget-ka caanka ah si aad ugu rakibto waxkasta oo Android ah adigoon bedelin Launcher.
X Kabadh Dhamaan shaashadaha qufulka ee ku jira Android: Samsung, Sony, LG….
X Locker waa barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo kuu keenaya dhammaan shaashadaha qufulka ee noocyada sida Samsung, Sony, LG iyo kuwo kale oo badan ...
Plex for Android hadda waxay ku dartaa tuuryo Nougat iyo astaamo kale oo cusub
Codsiga Plex ee loogu talagalay Android iyo Android TV waa la cusbooneysiiyey oo lagu darayaa waxyaabo badan oo cusub sida toobiyeyaasha, iyo cilladaha cilladaha
Sida ugu otomaatiga ah Android qaab fudud
Casharkaan fiidiyowga ah ee wax ku oolka ah waxaan ku barayaa sida otomatiga otomaatiga ah ee Android adoo u rakibaya codsi aad iyo aad u fudud in la isticmaalo.
Gboard for Android wuxuu kudarsadaa taageerada Google Translate, talooyinka emoji, iyo inbadan
Cusbooneysiinta cusub ee GBoard ee loogu talagalay Android waxay kujirtaa taageerada Google Translate, mowduucyada naxariista leh, soo jeedinta emoji iyo adeegsiga cusub ee codka
Kuwani waa xogta noocyada Android bishii Maarso 2017
Kuwani waa xogta noocyada Android bishii Maarso 2017, qaybinta Android ayaa sii socota socodkeeda sidaas darteedna ma jirto cid joojinaysa.
Dejinta My Nova Launcher
Halkan waxaad ku haysaa qaab-dhismeedkayga 'Nova Launcher' sida aad i weydiisay, qaabeyn shaqsiyeed oo ku saabsan qaabkan Nova Launcher Prime.
Kani waa barnaamijkeyga Android: shaqsiyeynta iyo codsiyada aan isticmaalo maalin kasta
Kani waa Android-kayga, u-habeynteyda iyo codsiyada aan maalin walba u adeegsado dib-u-eegis aan gebi ahaanba ku dhajiyay terminal-kayga Android.
[APK] Kala soo bax nuuca cusub ee 'Alcatel's Launcher' ee wixii Android ah
Halkan waxaad ku haysaa apk-ka nooca cusub ee ugu casrisan ee loo yaqaan 'Alcatel Launcher' oo ansax u ah wixii Android 4.1 ama ka sareeya
Khabiirka batteriga lithium wuxuu soo saaraa awood ka sii awood badan
John Goodennough, aabaha maanta baytariyada lithium dib loo soo celin karo, ee 94 jir ayaa ka dambeeya abuuritaanka qaar ka mid ah baytariyada casriga ah.
Muuqaalkan cusub ee fiidiyowga ah, waxaan kuusooqaadayaa seddex ciyaartoy muusig oo si gaar ah loogu talagalay shaashadda AMOLED, in kastoo loo isticmaali karo nooc kasta oo shaashad ah
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan Android Smart Lock
Halkan waxaad kuheleysaa cashar fiidiyow ah kaas oo aan kuugu sharaxayo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Android Smart Lock.
Haddii aad raadineyso inaad soo dejiso muusikada bilaashka ah ee ugu sarreeya tayada codka, waxaad ku jirtaa meesha saxda ah tan iyo markii aan ku tusayo sida si toos ah looga sameeyo VK Music.
Waad sii wadaysaa dalabyada iyo dallacsiinta, haddaba liistadan codsiyada bilaashka ah ee ah calaamadaha sumadda si aad u habeyn karto Android-kaaga
Sida loo tirtiro Xaaladda WhatsApp oo loogu noqdo WhatsApp-ka caadiga ah
Casharro wax ku ool ah oo aan ku tusiyo xitaa fiidiyoow caddaynaya, habka looga takhalusi karo Xaaladda WhatsApp oo loogu laabto WhatsApp-ka caadiga ah
Codsiga raadiyaha ugu fiican ee loogu talagalay Android
Tani waa waxa aniga maanta ii ah codsi raadiyaha ugu fiican ee loogu talagalay Android. Barnaamij lagu dhageysanayo raadiyaha aduunka oo dhan oo leh interface qurux badan.
Qaylodhaanta ugu fiican ee loogu talagalay Android waxaa loo yaqaan 'Timely' waana tan ay na siiso oo dhan
Halkan waxaad kuheleysaa cashar fiidiyow ah kaas oo aan ku tusayo wax kasta oo waxa aniga ii ah digniinta ugu fiican ee Android ay na siiso.
[APK] Ku raaxayso Qalabka 'Cheetah Mobile's QuickPick' oo aan raad dambe ku jirin
Quickpick APK, muuqaalka ugu wanaagsan ee Android ee waqtiga oo dhan, wax yar uun ka hor inta Cheetah Mobile uusan iibsan oo uu si buuxda u rarto.
Sida loo furo MAC oo leh dareeraha farahaaga Android
Tabobar wax ku ool ah ama khiyaano fudud oo aan ku awoodi doonno inaan ku furno MAC oo leh dareeraha faraha ee Android-ka si aad u macquul ah.
[APK] Soo degso oo ku rakib kumbuyuutarka cusub ee Xperia XZ Premium kumbuyuutar kasta oo Android ah
Tababbarka fiidiyowga ee la taaban karo oo aan ku tusinayo sida loo soo dejiyo loona rakibo kumbuyuutarka cusub ee Xperia XZ Premium ee lagu soo bandhigay MWC17
Ulefone Power 2 wuxuu soo bandhigi doonaa batari 6050 mAh ah
Kani waa Ulefone Armor 2, taleefanka cusub ee Ulefone oo u muuqda inuu yahay batari 6050 Mah Mah iyo 4 GB oo RAM ah
Dhakhaatiirta ugu sareysa, dhakhtarkaaga App
MWC-kan ayaa noo keenaya dalabka cusub ee dhakhaatiirta sare ee leh warar muhiim ah, sheekeysiga dhakhtarka-bukaanka iyo qiimeeyaha astaamaha
Ku hel badhanka shaashadda ee Pixel-ka Android-kaaga xidid la'aan
Pixbar waa codsi cusub oo laga heli karo Play Store kaas oo aad ku yeelan doonto badhanka shaashadda ee Pixel ku dhowaad casriga casriga ah ee Android
Kusoo nuqul WhatsApp-ka Android Nougat-daaqad badan si aad u noqon karto laba wada sheekaysi oo WhatsApp ah isla waqtigaas
Casharkaan noocan ah ee wax ku barashada ah waxaan ku barayaa sida loo nuqulo WhatsApp shaashadda loo qeybiyay ee Android Nougat, tani waxay ku dhowdahay barnaamij kasta.
[APK] Soo dejiso oo rakib nooca cusub ee Google Play Music 7.4 oo ay ka buuxaan warar
OS waxaan barnaa sida loo soo dejiyo loona rakibo nooca cusub ee Google Play Music 7.4 oo ay ka buuxaan warar iyo isbedello muuqda
LG wuxuu ku dhawaaqay X Power2, oo ah taleefan casri ah oo u muuqda batterigiisa weyn
Shirkada Kuuriyada Koonfureed ee LG waxay ku dhawaaqeysaa LG X Power2, oo ah taleefan casri ah oo dhamaadkiisu hooseeyo laakiin leh batari weyn oo siinaya ismaamul ballaaran
3 ciyaartoy miyuusig ah oo miisaan fudud oo shaqeynaya
Halkan waxaan kuugu keenayaa 3 Ciyaaryahan Muusig oo xasaasi ah oo loogu talagalay Android, aad u fudud oo shaqeynaya oo ay tahay inaadan dhaafin ama aadan seegi karin.
Tani waa sida ay u shaqeeyaan xaaladaha cusub ee WhatsApp
Waxaan ku tusineynaa sida ay u shaqeeyaan WhatsApp status-yada ay u badan tahay inay horeyba ugu shaqeynayeen dalabkaaga waxaadna la yaaban tahay wuxuu yahay.
Dropbox Paper ama habka loo hagaajiyo shaqada kooxda
Dropbox Paper waa fursad weyn oo loogu talagalay mashruucyada kooxeed ee aan ku hagaajineyno socodka shaqo ee ka dhexeeya kaqeybgalayaasha kala duwan
Halkan waxaan ku siineynaa waxa ay yiraahdeen waa xalka dhibaatooyinka isku xirnaanta Freedompop, dhibaatooyinka sii deynaya kumanaan isticmaaleyaal ah
Taleefoonkaaga casriga ahi miyuu kugu xidhayaa ama kaa jarayaa?
Taleefankeena casriga ah waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay qalab ku xiran adduunka laakiin sidoo kale carqalad naga goysa kuwa naga dhow
Telegram-ka 3.17 wuxuu u keenaa taageero mawduucyada gaarka ah
Ugu dambeyntiina waxaan horeyba ugu haysannay Android si gaar ah, iyo ka dib nooca desktop-ka, maxay yihiin mawduucyada caadada ah.
U oggolow dhaqdhaqaaqyada barta shaqada
Casharradan fiidiyowga ah ee wax ku oolka ah waxaan ku tuseynaa sida loo suurtogeliyo tilmaam ku saabsan bar-tilmaameedka si loo siiyo Android-kaaga wax-qabad badan haddii ay suurtagal tahay.
Ma waxaad ka beddeleysaa iPhone illaa Android? Xusuusnow inaad barkinta ka xirto iMessage
Haddii aad ka fikireyso inaad ka timaaddo Android-ka macruufka, mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa curyaaminta iMessage. Halkan waxaan ku barinaa sida loo sameeyo.
Ma rabtaa inaad ka aragto batteriga haray qalabkaaga ku xiran bluetooth-gaaga casriga ah? Hadday jawaabtu haa tahay, halkan waxaan ku siineynaa xalka.
Sida loo abuuro codsiyada waxqabadyada nidaamka. (Tilmaamaha)
Tabobar, fudud halka ay jirto, kaas oo aan ku barayo iyaga inay abuuraan barnaamijyo waxqabadyo codsiyo ama tuuryo kooban oo ka mid ah nidaamyada nidaamka ugu isticmaalka badan.
Adeegyada Google Play waxay ku siinayaan "coup de amara" Android 2.3 Gingerbread
Soosaarayaasha barnaamijka Android ma sii isticmaali karaan Google Play Services 10.2 barnaamijyada ku habboon Android 2.3 Gingerbread
Sida loo haysto bar-tilmaameedka shaashadda wixii ku jira Android kasta, xitaa meelaha korontada ku yaal ee leh badhannada jirka
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo haysto bar-tilmaameedka shaashadda wixii Android ah iyada oo aan loo baahnayn Root, Aynu aragno waxa badhamada shaashadda ay noqdaan.
[APK] You Tube Go lagama heli karo dalkaaga?. Halkan waxaa ah rasmiga rasmiga ah waxaanan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo si aad uga soo dejiso fiidiyowyada You Tube
Ma Tahay Tub Go Ma Ka Jirtaa Dalkaaga? Ha walwalin, waxaan ku tusi doonaa sida loo soo dejiyo, loo rakibo iyo tabaha loo adeegsado inaad ka soo degsato fiidiyowyada You Tube
Xiriiro aamin ah oo ka socda Google, barnaamijka badbaadin kara noloshaada
Waxaan ku faraxsanahay inaan idiin soo gudbiyo xiriiro lagu kalsoon yahay oo aniga ii noqday codsi muhiim ah maadaama uu yahay barnaamij noloshaada badbaadin kara.
Launcher-ka ugu fiican Android ee waqtiga oo dhan waxaa la dhahaa Launcher LAB waana Photoshop-ka Android Launchers-ka kaas oo noo ogolaanaya inaan abuurno Launcher-keena.
Sidee loo hagaajiyaa dhibaatada bootloop ee qaabka Soo-kabashada ka dib markii la isku dayay in lagu cusbooneysiiyo OTA-ga LinageOS
Halkan waxaa ah xalka dhibaatada bootloop ee qaabka Soo-kabashada kadib markii LinageOS cusbooneysiiso OTA. Waxaa lagu tijaabiyay LG G2 D802
Goorma ayuu Xiaomi yeelan doonaa Android 7?
Mudo intee le'eg ayaan sugeynaa ilaa Xiaomi si ugu dambeyntii loo helo casriyeynta muddada dheer la sugayay ee Android 7 Nougat? Magacaagu wuxuu noqon doonaa MIUI 9
Samsung Galaxy S6, S6 Edge, Edge + iyo Note 5 ayaa diyaar u ah inay helaan Nougat bishaan
Samsung Galaxy S6, S6 edge, S6 edge +, iyo Note 5 ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android 7.0 Nougat usbuuca soo socda. Samsung sidaas ayey u hoggaansameysaa ballanta.
Ciyaaryahan muusig ah oo loogu talagalay Android oo leh barbaraha codka weyn
Halkan waxaad kuheleysaa muusig muusig Android ah oo leh barbaraha codka weyn. Ciyaaryahan muusig oo kala duwan oo midabbo badan leh oo aad jeclaan doonto.
Sony Pikachu oo wata cufka octa-core, kamaradda 21MP iyo Android Nougat ayaa ka muuqda GFXBench
Sony Pikachu wuxuu soo maray GFXBench oo leh octa-core Helio P20 chip, 21MP camera iyo 3GB RAM; kaas oo noqon lahaa bedelka Xperia XA
Sida loo dhex geliyo kaarka SIM-ka cusub ee LG Watch Sport
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa nasiibka u leh ee horay u heystay LG Watch Sport cusub ee Google, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo geliyo kaarka SIM-ka saacaddaada.
Sida loo abuuro waraaqahaaga sawir qaadaha ah
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo abuuro waraaqahaaga sawir gacmeedkaaga si dhaqso leh oo fudud, waa inaadan ka maqnaan boostadan.
Qufulka shaashada leh dareeraha sawirka faraha iyo inbadan….
Ma rabtaa inaad awood u yeelatid inaad sameysid qufulka shaashadda adigoo u mahadcelinaya dareeraha faraha ee Android-kaaga? Hagaag, barnaamijkan bilaashka ah waxaad kuheli doontaa waqti la'aan.
Android Nougat oo leh EMUI 5.0 wuxuu bilaabmayaa in loo geeyo Sharafta 8
Laga bilaabo berrito, Android 7 Nougat oo ka hooseeya lakabka u-dejinta EMUI 5.0 ayaa bilaabi doona in lagu meeleeyo qalabka Honor 8.
3 Browsers Fayl Bilaash ah oo loogu talagalay Android Aad ufudud oo Xayeysiis la'aan ah ama Iibsasho App ah
Halkan waxaa ah seddex baarayaal faylal ah oo loogu talagalay Android, gebi ahaanba bilaash ah, aad u fudud oo fudud oo aan lahayn xayeysiis ama iibsasho app ah.
Android 7.0 Nougat wuxuu si rasmi ah u yimid NVIDIA Shield Tablet iyo Tablet K1
NVIDIA waxay ku heshay dhibco dhawr ah oo ay ku qanacsan tahay cusbooneysiinta Nougat ee loo yaqaan 'NVIDIA Shield Tablet' iyo K1 Tablet, oo ah laba qalab laga soo bilaabo 2014 iyo 2015.
Sida loo furo feylasha .vcf isla markaana loo maareyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin hadba sida ay doonaan
Casharradan wax ku oolka ah ee Android waxaan ku baraynaa inaad furto faylasha .vcf si aad wax uga beddesho oo aad u maamusho ama aad u maamusho waxyaabaha ay u baahan yihiin.
Ooniprobe oo ay soo saartay shirkadda 'Tor Project' ayaa kuu oggolaanaysa inaad isha ku hayso faafreebka internetka
Haddii aad rabto inaad ogaato haddii uu jiro degel ku yaal waddan uu xannibaadda xannibaadda ka xannibayo, barnaamijkan oo loo yaqaan Ooniprobe ayaa ku soo caawin doona.
Galaxy S8 wuxuu yeelan doonaa batariyaal la mid ah Galaxy Note 7
Model Samsung oo ah 8-inch oo ah Galaxy S6,2 Plus ayaa isku dari kara batteri la mid ah kan Note 7, oo leh awood dhan 3.500mAh
HabitHub, oo laga yaabo inay tahay barnaamijka ugu wanaagsan ee lagu raadsado
Haddii aad rabto inaad miisaankaaga dhinto ama aad wax ka barato toddobaad ka badan, HabitHub ayaa suurtogal ah inuu yahay barnaamijka ugu fiican ee lagu qoro guulahaas maalinlaha ah.
[TUTORIAL] Samsung Galaxy Note 7 Screen Splash, Bootanimation iyo Shutdown Animation oo lagu daray dhamaan dhawaaqyada nidaamka
Waxaan ku baraynaa sida loo beddelo shaashadda 'Splash Screen', "bootanimation" iyo xiridda shirkadda Samsung si aad ugu rogto Samsung Galaxy Note 7, marka lagu daro codadka nidaamka.
Sony waxay dib u cusbooneysiineysaa cusbooneysiinta Nougat ee Xperia Z5, Z3 + iyo Z4 Tablet
Hadda waxaad mar kale ku cusbooneysiin kartaa taleefankaaga cusbooneysiinta Nougat 7.0 haddii aad haysato Xperia Z5, Z3 + iyo Z4 Tablet ka dib markii aad joojisay Sony
Mid kamida warshadaha Samsung ee masuulka ka ah baytariyada Note 7 ayaa dab qabadsiiya
Dab ayaa ka bilowday mid ka mid ah warshadaha Samsung SDI, oo ah shirkad hoosaad ka ah soo saaraha mas'uulka ka ah soo saarida baytariyada Note 7 iyo Galaxy S8
Ka dhig geesaha shaashaddaada moobaylka barnaamijkan
Haddii aad raadineysid habeyn ballaaran oo ku saabsan taleefankaaga casriga ah oo aad rabto in geesaha taleefankaaga casriga ahi wareegaan, Cornerfly ayaa kuu dhashay.
Sida loo yeesho badhannada Pixel-like-ka ee loo yaqaan 'Pixel-like navigation' ee ku jira Android-kaaga iyada oo aan xidid laga dhigin
Haddii aad raadineyso inaad haysato badhanka hagidda ee Google Pixel iyo Pixel XL, barnaamijkan, adigoon xidid noqon, waxaad ku haysan kartaa barnaamijkaaga 'Android'
Dhalashada Maqalka Dib-u-dhalashada 2017 waxay sameysaa jadwal si loo aamusiyo taleefanka waqtiyada qaarkood
Sound Off Reborn 2017 waa barnaamij xiiso leh oo loogu talagalay hagaajinta "ha dhibin" shaqeynta telefoonada Android. Qalab lagu aamusiyo mobilada.
Sida loo ekaysiiyo barta Windows task on your Android
Mashruucan waxaan ku tusayaa sida ugu habboon ee loo siman yahay Windows taskbar-ka bartayaasha Android iyadoo ay ugu wacan tahay rakibidda fudud ee barnaamij bilaash ah.
Waxqabadka Launcher wuxuu keenayaa marin abuurka Pixel Launcher ilaa beta
Waxqabadka Launcher beta wuxuu keenayaa marinka loo yaqaan 'Pixel Launcher app' oo ah dariiqooyinka si aad u tijaabiso ka hor nooca ugu dambeeya
Sida ugu habboon ee loo ekeysiiyo Had iyo jeer Samsung Galaxy S7
Ma rabtaa inaad si fiican u jiliso had iyo jeer Waxqabadka Samsung Galaxy S7? Hadday sidaas tahay, waxaan kuu keenayaa abka ku habboon ee lagu gaarayo.
Gelinta Android 7 Nougat waxay u bilaabmaysaa dadka isticmaala Moto Z libre
Motorola waxay ku bixisaa ballanqaadkeeda waxayna bilaabeysaa inay soo saarto cusbooneysiinta Android 7 Nougat ee loogu talagalay dadka isticmaala Moto Z
Ciyaaryahan muusig oo madadaalo u ah Android oo leh taageerada Snaptube
Ma ka daashay ciyaartoyda muusikada ee Android? Maanta waxaan kuu keenayaa madadaalo, muusig muusig kala duwan oo loogu talagalay Android oo leh taageerada Snaptube.
Sida si toos ah loogu helo fiidiyowga YouTube-ka heesta aad dhegeysaneyso
Music Mate waa barnaamij cusub oo ku jira beta kaas oo si otomaatig ah u helaya fiidiyaha YouTube-ka ee heesta la ciyaaray
Samsung Galaxy A5 kii ugu horreeyay ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android 7.0 Nougat
Samsung ayaa xaqiijisay in nooca ugu horreeya ee Samsung Galaxy A5 uu heli doono Android 7.0 Nougat bilaha soo socda.
[APK] WhatsApp wuxuu ku darayaa emojis badan oo cusub Android 7.1
Macno malahan nooca Android aad haysato, laga bilaabo nooca beta ee WhatsApp waxaad hadda kaheli kartaa dhammaan inta cusub ee emojis cusub.
Sida loo abuuro duubistaada fiidiyowgaaga ah si aad ula wadaagto cidkasta oo aad rabto MadLipz app fashion
Maanta waxaan kuu keenayaa fiidiyow badda madadaalo leh oo aan ku barayo inaad sameysato muuqaallo fiidiyoow ah ama muuqaallo fiidiyoow ah si aad ula wadaagto cidda aad rabto.
Samsung waxay wadahadallo kula jirtaa shirkad batariyiin ah oo iibisa batroolka Galaxy S8
Maaddaama cutubyo badan oo ka mid ah Galaxy S8 la filayo in la iibiyo, Samsung waxay ku jirtaa wada-hadallo ay ku doonayso inay ku iibiso batteri kale; markan waa Jabbaan.
FADLAN !!. Habka ugu fiican ee loo maareeyo xiriirada ku saabsan Android
Haddii aad raadineyso habka ugu wanaagsan ee aad u maamuli karto xiriirada aad ku leedahay Android, maanta waxaan kuu soo qaataa barnaamijkan xiisaha leh ee Dialer iyo Xiriirada oo hubaal aan kaa tagi doonin danayn.
Android-kayga iima ogola in aan galo koontadayda Google, waxay ku sii jirtaa "Hubinta macluumaadka"
Haddii Android-kaaga uusan kuu oggolaanayn inaad gasho koontadaada Google, halkan waxaa ku yaal tilmaamo aad raacayso si aad isugu daydo inaad u xalliso dhibaatada.
Kalandarka DigiCal waa barnaamij leh astaamo badan oo aan laga heli karin Kalandarka Google
Kalandarka Google waa mid ka mid ah barnaamijyada kalandarka ugu fiican, laakiin DigiCal Calendar waa mid kale oo adeegsada cilladaheeda inuu noqdo beddel weyn.
2 siyaabood oo loo soo saaro APKS lagu rakibay Android oo aan lahayn Root
Maanta waxaan kuu keenayaa laba dariiqo oo aad u kala geddisan si aad uga soo saarto apk-ka barnaamijyada lagu rakibay teendhooyinkaaga Android.
Sida loo ekeysiiyo Android N iyo adeegsigeeda adeegsigiisa oo buuxa Launcher-kan bilaashka ah
Maanta waxaan sharxayaa sida loo ekeysiiyo Android N iyo adeegsigeeda oo buuxa iyadoo ay ugu wacan tahay rakibidda kaliya ee Launcher gabi ahaanba bilaash ah.
Quidgets wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka bilowdo wijetiyada kombuyutarka deg degga ah ee Android
Haddii aad raadineyso inaad ku darto wijetiyada kombuyuutarka Android Quick Settings, Quidgets waa barnaamij cusub oo kuu oggolaanaya inaad taas sameyso
Sida loo ogaado haddii qof akhriyo farriimahaaga xitaa haddii uu 'Akhri rasiidhada' naafo yahay
Haddii aad rabto inaad ogaato haddii qof akhriyo farriimahaaga markii uu xitaa "Akhri rasiidhada" naafo yahay, xeeladdan ayaa laga yaabaa inay faa'iido leedahay.
Sida Loo Wax Ka Bedelo Barmaamijka mugga ee Android oo aan xidid lahayn
Ma rabtaa inaad wax ka beddesho bar mugga Android laakiin ma tihid isticmaale Root ah? Hagaag, ha walwalin maxaa yeelay waxaan ku barinaa sida ugu fudud ee loo helo.
Sida loo dejiyo heerar mug ah oo kala duwan mid kasta oo ka mid ah qalabkaaga Bluetooth
Haddii aad raadineyso wadiiqad aad otomaatig uga dhigto hagaajinta heerka mugga ee qalab kasta oo Bluetooth ah oo aad ku xirtay taleefankaaga casriga ah, hagahan ayaa qumman.
Cusbooneysiinta Kiiboodhka Cusub ee Swype wuxuu keenayaa Emoji Saadaalin iyo inbadan
Keyd Swype wuxuu ahaa horudhaca qoraalka tilmaamaha moobilka hadana waxaa lagu cusboonaysiiyay sheeko aad u xiiso badan.
Sida loo wareejiyo faylasha u dhexeeya qalabka Android habka ugu dhaqsaha badan
Maanta waxaan ku tusayaa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loogu wareejiyo faylasha u dhexeeya aaladaha Android sida ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan.
HTC waxay joojineysaa geynta Android Nougat HTC 10 markale
Sida Sony iyo ZTE, HTC waa inay joojiso wadada cusbooneysiinta Nougat ee loo yaqaan 'HTC 10' cusub.
Com.android.systemui wuu istaagay, ciladdu waxay noqon kartaa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee raadinta Google, waxaan ku baraynaa sida loo hagaajiyo
Haddii aad hesho khaladka Com.android.systemui ayaa istaagay, sababtu waxay noqon kartaa arjiga raadinta Google, waxaan ku bari doonaa sida loo xalliyo.
Halkan waxaa ah laba xeeladood oo lagu hagaajinayo waxqabadka LG G3 iyadoon loo baahnayn inuu ahaado isticmaale xidid ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinka LG G3 ugu yaraan illaa laga helo casriyeyn rasmi ah oo lagu xalliyo.
Samsung waxay tijaabineysaa cusbooneysiinta Nougat ee Galaxy S6 edge +
Taxanaha Samsung ee Galaxy S6 ayaa wali sugaya Samsung inay soo saarto Nougat mar uun.
Haddii internetka gurigaagu gaabis yahay waxaa laga yaabaa inuu sabab u yahay Sawirada Google
Haddii internetka gurigu gaabis yahay oo aad tahay isticmaale Android ah, khaladku wuxuu noqon karaa codsi Sawirro Google ah. Waxaan ku tusaynaa xalka.
Ugu dambeyntii, HTC 10, oo lagu daray qaab nololeedka HTC 10 iyo One M9, ayaa helaya casriyeynta Android 7.0 Nougat iyada oo loo marayo OTA.
Launcher Android ah oo kaa caawin doona inaad badbaadiso batteriga
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Launcher cusub oo Android ah oo kaa caawin doona inaad batari badan ku keydiso Smartphone-kaaga. Launcher bilaash ah oo aan lahayn xayeysiisyo la dhisay.
A weyn 18,4 tablet Nokia kiniin leh Android Nougat ayaa ka muuqda GFXBench
Nokia waxay rajeyneysaa inay soo saarto kiniin sannadkan, in kasta oo ay weyn tahay in laga gaaro shaashadda illaa 18,4 inji.
Samsung waxay xaqiijineysaa in baytariyada ay sabab u ahaayeen qaraxyada Galaxy Note 7
Samsung waxay si rasmi ah u shaacineysaa in baytariyada ay sabab u ahaayeen dabka Galaxy Note 7, waxayna ku dhawaaqeysaa talaabooyin wanaagsan oo dhanka amaanka ah
Sida Loogu Helo loona Wadaago GIF-yada Animated iyo Emojis Gboard-ka
Gboard waa mid ka mid ah kumbuyuutarrada ugu wanaagsan ee Android oo hadda xitaa waxay leedahay xulashada raadinta Google ee lagu dhisay. Waxaan ku baraynaa inaad raadiso GIFs iyo emojis.
"Cabirka aan caadiga ahayn" ee batteriga, sabab u noqon karta dabka Galaxy Note 7
Samsung waxay tilmaami doontaa cabbirka aan caadiga ahayn ee baytariyada iyo cilladaha soo saarista oo sabab u ah fashilka ku yimid Galaxy Note 7
Sida loo helo sawirada sabuuradda ku jira ee Android
Waxaa dhici karta in sawir lagu keydiyay sabuuradda oo midkoodna uusan garanayn sida looga saaro halkaas. Waxaan ku barnaa sida loo sameeyo.
Sida loo kiciyo qaabka daaqad badan ee ku jira Android Nougat
In Android Nougat waxaad ka heli kartaa qaabka daaqadaha badan ee sida caadiga ah ku yimaada fiidiyowgan iyo casharradan aan ku tusinno dhammaan tallaabooyinka.
Maamuuska 8 wuxuu bilaabaa inuu helo Android 7.0 Nougat
Maamuuska 8 wuxuu horey u helayaa Android 7.0 Nougat oo ay weheliso EMUI 5.0, oo ah nooca ugu dambeeya ee Huawei Honor interface oo lagu sii daayay Mate 9
Sony waxay go’aansatay inay kala baxdo ROM-yada lagu heli karo Android 7.0 Nougat oo ka mid ah server-keeda markay la kulantay dhibaato, taas oo umuuqata inay tahay mid mug weyn.
Sheekooyinka Instagram waa mid ka mid ah wararka ugu wanaagsan ee lagu garaaco Instagram sannadihii la soo dhaafay. Waxaan ku tusaynaa sida loo abuuro mid.
Cod ku dhawaaqaya yaa ku soo wacaya, ma khalad baa?
Iska jooji codka codka ku dhawaaqaya magaca qofka kula soo xiriiraya ee kugu soo wacaya. Ma awoodid? Raac dhawr tallaabo oo fudud oo waad dhamaysay.
Sida loo hagaajiyo xiritaanka waqtigiisa ee Instagram haddii aad ku xanuunsato saacadihii ugu dambeeyay
Saacadihii ugu dambeeyay cillad aan munaasib aheyn ayaa laga helay barta Instagram taas oo dhacda markii waxyaabaha ku jira loo soo raro shabakada bulshada ee caanka ah.
Kuwani waa taariikhda cusbooneysiinta Nougat ee moodooyinka Huawei ee Shiinaha
Huawei P9 ayaa loo cusbooneysiin karaa Nougat usbuuca soo socda sida ku xusan liiska muujinaya dhammaan wixii cusbooneysiin ah ee ka soo baxa Shiinaha.
Ku soo dejiso Blackmart dhabta ah si toos ah is-cusbooneysiinta apk
Halkan waxaan kaaga tagayaa inaad soo dejiso barnaamijka 'Blackmart' oo ah qaab apk ah oo si fudud loogu rakibo terminaal kasta oo Android ah. Sidoo kale waa is-cusbooneysiin bilowga dalabka.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad TV uga daawato Android
Ma dooneysaa inaad TV ka daawato Android-ka oo aadan ogeyn halka laga bilaabayo? Qoraalkan waxaan ku sharaxeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Maqnaanshaha caqli-galnimada Nougat ee Moto Z noocyo kala duwan
Mararka qaarkood waxay ku qaataan iyaga oo ku dhowaad nooga dhigaya hadal la'aan, in kasta oo aan wax badan ka fahmayno sababta oo ah soo saarayaasha qaar ayaa waqtigooda ku qaata inay cusbooneysiiyaan boosteejooyinka
Sida loo siiyo ogeysiisyada Android qaab kale iyadoon loo baahnayn xidid
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo siiyo ogeysiiska Android qaab kale oo aan lahayn Root ama raac casharrada adag ee Xposed ama wax la mid ah
Sidee dib ugu laaban kartaa ogeysiisyada Kit Kat style
Maanta waxaan ku tusineynaa sida aad ugu laaban laheyd qaabka ogeysiiska Kit Kat adigoon noqonin kuwa isticmaala xididka ama raac casharro adag.
Cusbooneysiinta Android 7.0 Nougat waxay bilaabmaysaa in loo rogo Xperia Z5 iyo Z5 Premium
Android 7.0 Nougat hadda waxaa loo heli karaa Xperia Z5 iyo Xperia Z5 Premium laga bilaabo maanta oo leh taxane cusub oo cusub.
HTC One A9 ayaa ugu dambeyn heleysa cusbooneysiinta Nougat kadib 146 maalmood
HTC waxay soo saartay Android Nougat 146 maalmood kadib markii loo ballanqaaday HTC A9. Dib u dhac ku yimaada buunbuunin loogu talagalay xayeysiinta aad u isticmaashay boosteejada.
WhatsApp horey ayey u heysatay ogeysiisyada Nougat oo si sax ah u shaqeynaya
Ugu dambeyntiina, adeegsadayaasha haysta aaladda leh Nougat waxay awoodi doonaan inay ku isticmaalaan ogeysiisyada la hagaajiyay sidoo kale WhatsApp.